Na-arụ ọrụ na Dubai maka mkpanaka - nnata ego, onyinye [+ ọnụahịa, ego] |
Dubai nọ na-adọta ndị njem si n'akụkụ ụwa niile ọtụtụ afọ.
bipụtara Ụlọ ọrụ Dubai City at October 21, 2019
Na-arụ ọrụ n'ime Dubai maka osisi, na Dubai, izu ụka na-amalite na Tọzdee wee kwụsị na Satọde.
Ihu igwe na-ekpo ọkụ ma na ụgwọ ọnwa dị ka nke a Fairytale nke 1000 na otu abalị.
Inrụ ọrụ na Dubai bụ isiokwu dị ọkụ, mana anyị ga-agafe isi ndị ahụ ma gbado anya na ozi bara uru, egosipụtara.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịrụ ọrụ na Dubai, yabụ site n'isiokwu a, ị ga-amụta:
Ego ole ka ị na-akpata na Dubai
onye nwere ike inweta ọrụ na Dubai
Kedu ihe ụtụ isi, ọnụahịa na ọnọdụ obibi na Dubai?
You na-etinye akwụkwọ maka ọrụ na Dubai? Chọrọ CV ọkachamara.
Adaberekwa na Okwu na nnwale gị, n'ihi na CV gị ga-abụrịrị n'usoro echeghi ederede kama edekwara na Bekee ziri ezi.
jiri Ọkachamara CV ị gagh echegbu onwe gị banyere ofdị akwụkwọ a.
akwụ ụgwọ: https://interviewme.pl/blog/praca-w-dubaju
Hụ atụmatụ ndị ọzọ, meputa CV na akwukwo ozi ma budata akwukwo PDF n’ebe a
Enwetara m nnukwu ọrụ ngwa ngwa n'ihi nnukwu CV na akwụkwọ ozi ahụ!
Na-arụ ọrụ na Dubai
Workingrụ ọrụ na Dubai bụ nrọ nke ọtụtụ ndị bi na kọntinent anyị na ihe mekey maka onye ọ bụla chọrọ inweta nnukwu ego.
Nke a bụ n'ihi na United Arab Emirates ịdabere na ndị ọrụ Western European nke gụrụ akwụkwọ.
Omume kachasị na ngalaba dịka:
ọrụ njikwa ego
Ọzọkwa, ndị nnọchi anya ụlọ ọrụ ahụike na ndị na-ewu ụlọ na-ahụ ọrụ ebe a, yana ndị injinia, ndị na-ese ihe, ndị ọkachamara IT. ndi n’ezi ulo , ndị ọkachamara na iwu, telekomunikselụ, mpaghara mmanụ na ndị ọrụ nchịkwa.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ azụmahịa niile dị na Dubai bụ ndị mba ọzọ na-elekọta.
Ndị ọchụnta ego mpaghara na-enye ha ikikere achọrọ - n'ezie maka ụgwọ ụfọdụ akọwapụtara ( PLN 15-20 puku ).
Ọ na - esiri ike na Dubai siri ike?
Companieslọ ọrụ na-etinye ego buru ibu na usoro mbanye, nke gụnyere ụgwọ visa, ụgbọ elu, mkpuchi ahụike, yana uru ụlọ.
Ya mere, ọ bụrụ na ha họrọ mmadụ, ọ ga-abụ na ọ ga-abụ onye zuru oke.
Yabụ tupu ịmalite itinye n'ọrụ na Dubai, jide n'aka na ịchọrọ ịkwaga ebe a.
Gbalia ihu na ikwuputa ma tugharihari akwukwo gi niile, karisia ndi bekee, maka na achoro ha na ndi ozo.
Jikere njikere inwe ego iji banye na Dubai maka ubochi mbu gi.
Etu esi acho oru na Dubai?
Ọtụtụ ndị ọrụ na-abịa ebe a n'ihi na ha nwetara ọrụ site n'aka onye were ha n'ọrụ na Europe.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịrụ ọrụ nke aka gị ma nweta ọrụ na Dubai site na iziga CV, ị ga-agbasi mbọ ike.
Hụ otu esi eme ihe banyere nsogbu ahụ.
Na mbụ - mepụta profaịlụ na LinkedIn , n'ihi na Portal a bụ nnukwu ngwaọrụ iji guzobe kọntaktị ọkachamara.
Nke abuo - nweta enyemaka site na ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọrụ. Can nwere ike ịnwale:
Dubai Company (nke bụbu kemgbe) n'ọrụ ndị ọrụ na mba Middle East maka ihe karịrị 12 afọ)
Jivaro Partners (ọrụ na-enye na ahia na PR)
MCG & Ndị Mmekọ (PR, ahia)
Robbert Murray (ihe owuwu na injin)
BAC Middle East (ịzụ ahịa na njikwa, injinịa)
Ebe a will ga - ahụ ndepụta nke ụlọ ọrụ na - ahụ maka ọrụ ga - enyere gị aka ọ bụghị naanị ịchọta ọrụ na Dubai, kamakwa ịchọ izu ụgwọ ọrụ.
Nke ato - lelee peeji ndị na-eso nke a na-enye ọrụ na Dubai:
Iji malite na , bayt.com , nke a ma ama n'etiti ndị na-achọ ọrụ na Dubai.
Ibe ndi ozo bara uru ma nye onyinye bu:
Ọrụ Khaleej Times
Anọ - nzi ozi.
A maara Dubai maka itinye ndị ọrụ n'ime na site na mmemme ntụaka. Y’oburu azụmahịa ihe omuma, ohere gi inweta oru na-abawanye site na 6.6% .
Ọ bụrụ na ịnọghị na Dubai, ikekwe ị ga-ahụ ọrụ na obodo ọzọ na-abụghị Poland? Lelee ederede anyị: Na-arụ ọrụ ná mba ọzọ - kedu na ebe ị ga-achọ ya? Ebe aga
Na-arụ ọrụ na Dubai maka mkpanaka
Na Dubai, ọdịghị mkpa ọ bụrụ na inwere si na Germany, Great Britain ma ọ bụ Poland.
Ọ bụrụ n ’ị maara asụsụ Bekee nke ọma, nweekwa ntozu oke ọrụ, yabụ ohere gị ọrụ Dubai bara ụba.
Agbanyeghị, ọtụtụ ndị ọrụ bịara ebe a maka nkwekọrịta (ọ na-adị ogologo oge maka 3 afọ ma enwere ike ịgbatị ya).
Y’oburu na onodu a wee buru onye isi Dubai zipuru gi ya, mara na onye were gi n ’oru gha kpuchite ego:
mkpuchi ahụike maka ndị ezinaụlọ niile
agụmakwụkwọ ụlọ akwụkwọ nke ụmụaka,
ihe eji eme ulo, ngwa ulo na mmefu ndi ozo metụtara na-aga Dubai.
N’ezie, n’ọkwa dị elu, ka ukwuu uru onye ọrụ nwere ike ịdabere na ya.
Iwu izugbe bụ na ego ole enyere gị na mbido nkwekọrịta a agaghị akwụghachi ma ọ bụrụhaala ịmechara kọntaktị ahụ.
Ma ọ bụghị ya, ị ga-akwụghachi ụgwọ banyere ⅔ nakọtara nzụlite maka mmepe.
Osisi na Dubai
Ihe mkpanaka 2,000 bi na-arụ ọrụ na Dubai.
Ọ bụrụ n’ị sonyere ndị otu a, ị ga -achọ ike ịme ndị kọntaktị na ndị ha na ha nọ.
Nrụ ọrụ na Dubai na-erite uru site na otu Facebook, ebe ha na-agbanweta ozi bara uru banyere ndụ n'obodo, na-ahazi ihe omume, ma na-akpọsa ebe ọrụ ha.
Lee njikọ a:
Na-arụ ọrụ na Dubai na-enweghị asụsụ
Asụsụ Izugbe dị na Dubai bụ Arabik, mana mmadụ niile nwere ike ịsụ Bekee ebe a.
Nke a bụ n'ihi ihe dị ka 90% nke ndị bi na Dubai bụ ndị ọbịa .
Kwesighi ịma asụsụ Arabik, mana asụsụ Bekee ga-adị mkpa.
Ikwesiri igu akwukwo a: Asambodo n'asụsụ Bekee: FCE, CAE, CPE (ule na uru ịgafe) .
Enweta ego na Dubai
Enwere akụkọ mgbe ochie banyere etu ị ga-esi na-arụ ọrụ na Dubai.
Na mgbakwunye, ha niile bụ eziokwu.
Fọrọ nke nta.
Ma banyere nke a n’oge na-adịghị anya.
Ogologo ụgwọ ọrụ na Dubai bụ AED 130,000, ma ọ bụ PLN 134,400.
Ọnụ ego ndị a metụtara ndị ọkachamara gụrụ akwụkwọ ma mara nke ọma, n'ihi na onye ọrụ nwere ntozu ogo ya enweghị ohere ịnweta ọrụ ebe a.
Ezigbo ihe mmemme ga enweta ego rue PLN 50,000.
Nweta nlekọta na Emirates - PLN 9,000 + ebe obibi.
Onye nyocha ego nwere ike ịgụta PLN 27,000 otu ọnwa.
Nleta nke ndị na-eche ọrụ, ndị na-ere ahịa, ndị ọbịa na-enweta n'etiti 2-4 puku. Euro kwa ọnwa.
Apụrụ m ịhụ ụmụ gị ka ha na-ewere dollar, ma ọ bụ
Mkpụrụ ego ọ bụla nwere akụkụ abụọ.
Ọ bụ ihe nwute, Dubai nwere ihu ọchịchịrị ya, nke a na-edezighị banyere ya.
Ọ bụ ọrụ dị ọnụ ala na-elekọta ndị bi n'obodo ukwu, na-arụ ọrụ na ebe nrụọrụ, na-ebuga nri ma ọ bụ nhicha.
Ọ bụ ndị ọrụ si India, Bangladesh ma ọ bụ Pakistan na-abụ klas ndị a.
Ndi Esia na eme ọtụtụ ọrụ arụ Ebe a maka ụgwọ ọnwa nke anaghị egboju ndị Europe kpamkpam.
Ha na-esi n'ebe dị anya na-arụ ọrụ, mgbe a na-ewere onye na-agbanwe, ha na-abanye bọs na-aga ụlọ ha, tere aka na Dubai.
A naghị akwụkarị ha ụgwọ -aghụghi anya, nihi na ihe obula di njo na adabaghi ​​n’onyinyi nke obodo mara mma nke ndi bara uba, kpochapu ya nke oma.
N'ikwu okwu ego, ị nwere ike nwee mmasị na ndụmọdụ nke anyị ọrụ ọkachamara na ederede: Ego esi agbazi ụgwọ ọnwa? Ndụmọdụ 13 banyere otu esi ekwu banyere ego.
Ibi na Dubai
Onye ọ bụla maara ihe dị na Dubai - enyo enyo na enyo dị ịtụnanya, mbara igwe na-acha anụnụ anụnụ, nkwụ na ebili mmiri nke Ọwara Oké Osimiri Peshia n’anyanwụ.
Nke ahụ bụ Ebe ọ bụ Dubai , ọ bụ ihe doro anya, n'ihi na ị nwere ike ịhụ na foto a dị n'elu yi uwe ejiji na-acha ọcha kandury Arab.
Agbakwunyere na okomoko nke oge a, ihe ọchị na ihe ịrịba ama nke ịda ogbenye.
Dubai bụ nrọ ịmụrụ anya - obodo nke tọrọ ntọala 60 afọ gara aga ma nwee ụba ozugbo mgbe achọtara nkwụnye ego mmanụ.
Taa, ọ bụ ebe azụmahịa zuru ụwa ọnụ na njem.
Kedu ka ndụ si dị n’obodo a?
Okpomoku di na Dubai
Ọ na-ekpo ọkụ n'oge afọ - site na 24 degrees na Jenụwarị ruo 41 n'oge ọkọchị.
Oge a na-ebugharị na Dubai ka ọ bụrụ 3 awa tupu oge ugbu a na Poland (ị nwere ike ịlele ya Ebe a ).
Ego na Dubai
Earn ga-akpata Dirham in Dubai .
Ego a nwere uru o yiri nke zloty, yabụ na ị gaghị enwe nsogbu ịgụta ego ị na-enweta.
Ahịa na Dubai
Ndị a table egosiputa onu ahia nke ngwa ahia na oru na Dubai. Nyere ego ole ị na enweta, ndu gi n’ebe a dikwa mma:
nri abalị (nke ihe ọ drinkụ drinkụ) - 61 PLN
McDonalds setịpụrụ - PLN 29
mmiri ara ehi liter - PLN 6
12 nsen - 15 PLN
1 n'arọ nke tomato - PLN 7
ọkara kilo nke chiiz mpaghara - PLN 30
Kilogram 1 apụl - PLN 11
kilogram nke nduku - 4.69 PLN
0.5 l nke biya sitere na ụlọ ahịa - PLN 25
karama mmanya mmanya - 107 PLN
Coca-Cola 2-liter - PLN 7
achịcha - 4.96 PLN
Otu ụzọ abụọ nke jeans jeans - PLN 311
rodo-on deodorant - PLN 16
ncha ntutu - PLN 21
nhicha eze - 16 PLN
ịgbazite nnukwu ụlọ na mpaghara dị oke ọnụ - gburugburu PLN 8,000
ịgbazite nnukwu ụlọ na mpaghara oge - ihe dị ka. PLN 6,000
ụgwọ ụlọ kwa ọnwa maka ihe dị ka ụlọ. 85 m2 - ihe ruru. 747 PLN
Ntutu isi nwoke - 68 PLN
Dubai - kedu uru ịmara?
United Arab Emirates bụ ọdịbendị dị iche.
Ọ bụ ezie na ọ nweghị onye ọ bụla tụrụ ndụ n'anya nke ndị Europe, mana ị ka ga-eburu n'uche ụkpụrụ obodo ndị na-ekpebi okpukpe na omenala.
Otu oge n’afọ, a na-enwe Ramadan, mgbe ị na-eri ma ọ bụ drinkụọ mmiri ruo mgbe anyanwụ dara. Ndị Europe nwekwara ọrụ nke irube isi na ikike a.
N'oge ndị ọzọ, ịnwere ike ị consumeụ ihe ọholicụ alcoụ na-aba n'anya, mana naanị maka ndị gaferela 21 afọ.
Ọ dị nwute
Aụ biya ma ọ bụ mmanya bụ n'efu ka a hụrụ n'ụlọ ahịa.
Enwere ike ghara ị consumedụ mmanya n ’ọha ọha. Mmachibido iwu ahụ anaghị etinye na ụlọ oriri na ọ .ụ hotelsụ na n'ụlọ nri.
Inwere ike ịbanye n’azụ ụlọ maka ịnya ịnya mmanya.
Na-aza ajụjụ a -
Ọ dị mma na Dubai . Nke a bụ echiche nke ọtụtụ ndị bi na 97% nke ndị bi na Arab Emirates, jụrụ na nyocha ahụ banyere ma ha nwere ihe na-adịghị mma ebe a.
Enweghị ebe ndị omempụ dị mfe igosi na ikpe ziri ezi. A sị ka e kwuwe, onye njem ma ọ bụ onye ọrụ chọrọ ịme ọrụ ebe a agaghị etinye akparamagwa ọjọọ n'ihi na ọ na-efunahụ ihe ọ bịara ebe a: ezumike ma ọ bụ ọrụ.
Visa na Dubai
Dika anyi guru na weebụsaịtị nke ụlọ ọrụ mgbasa ozi United Arab Emirates:
Mụ amaala Polish achọghị a visa nye banye na mpaghara United Arab Emirates (PZEA) ma ọ bụrụ na ha gaa maka oge 90 kachasị oge ọ bụla ọnwa isii maka nlegharị anya, ọdịbendị, sayensị, ezinụlọ na ndị enyi.
Ikpe a bụ obere ihe dị iche iche maka ndị na-abịa Dubai maka ebumnuche ọrụ.
Iji nweta visa onye ọrụ, ị ga-ebu ụzọ nwee paspọtụ dị irè maka opekata mpe ọnwa 6. Akwụkwọ ahụ kwesịrị inwe foto ụcha dị ugbu a (ọ bụghị oji na ọcha).
Iji nweta visa obibi, naanị ihe ị ga - eme bụ inweta ọrụ na Dubai.
N’ezie, n’ime ụlọ ọrụ nke hiwere isi na Dubai. Thelọ ọrụ ahụ mechara bụrụ onye a na-akpọ “onye nkwado” ma na-eme usoro visa ka onye ahụ wee bụrụ onye bi na Dubai / UAE.
You nwere ike ịnweta a obibi visa na uzo 3:
site na iguzobe ụlọ ọrụ na UAE
site na inwe aku ma obu itinye ego na aku na UAE
site na ndị ọrụ ma ọ bụ nkwekọrịta ndị ọrụ.
O di nwute, oburu na oru gi na Dubai gha efuo visa gi. Ọ bụrụ na ịchọtaghị ọrụ ọhụrụ, ị ga-ahapụ ụlọ.
Dubai - ihe ndị mara mma na ihe bara ezigbo uru ịchọrọ ịma tupu ịmalite ọrụ
1. Enweghị echiche nke ụmụ amaala na UAE. Enweghịkwa ahụike steeti na mkpuchi mmekọrịta ọha na eze.
2. Enweghị ego ụtụ isi na Dubai .
Nke a pụtakwara na ụgwọ ọnwa gị metụtara akaụntụ ahụ zuru ezu, n’etinyeghị akụkụ steeti ahụ akọwapụtara.
Dabere na nkwekọrịta nke gọọmentị Polish na gọọmentị UAE, ụgwọ, ụgwọ ọnwa na ụgwọ ọrụ ndị ọzọ na-esite na ọrụ na Emirates bụ ụtụ isi naanị na mba ahụ.
Yabụ ị ga-eweta ego niile ị nwetara na Dubai na Poland (ọ bụrụ na itinyeghị ihe niile ebe ahụ).
3. Iwu ahụ bụ na onye were ya n’ọrụ n’afọ na-akwụ onye ọrụ ya ụgwọ tiketi. N'ọtụtụ oge ọ na-akwụ ụgwọ ụlọ ya.
You nwere ike ịchekwa 80-90% nke ego ị nwetara n’ụzọ dị otu a!
4. Ndị lụrụ di na nwunye na-abụghị di na nwunye ga-enwe nnukwu nsogbu ịnabata otu ụlọ. Otu ụzọ ọ ga - esi pụta bụ agbamakwụkwọ ngwa ngwa tupu ịhapụ Dubai.
Workingrụ ọrụ na Dubai na-ada ụda dị ka nrọ, mana ọ bụghị naanị ụzọ iji nwee ndụ ọkachamara na-atọ ụtọ. Gụọ akụkọ a: Etu ị ga-esi nweta ọrụ na paradaịs n’ụwa? Ezigbo echiche na akụkọ.
Iji nweta ọrụ na Dubai, ike nnukwu CV!
A sị ka e kwuwe, ị sonyechara ndị ọkachamara kachasị mma sitere na gburugburu ụwa.
Cheta ịgụnye a nchịkọta ọkachamara na CV gị. Ọ bụ ọkọlọtọ na West, ị nweghị ike ịmagbu ngalaba a.
Zaa ihe ndị achọrọ n’ọrụ a chọrọ. Isi ihe ga - eme ka ndị ọrụ mee nke ọma dakọtara CV gị na ọrụ achọrọ .
Gosiputa na inwere ike karia ndi ochichi ndi ozo. Iji mezuo nsonaazụ a, zere izugbe. Kọwaa nke gị Ihe omume CV n’ime Asụsụ uru ọ ga-abara gị ma kwenye onye were gị n'ọrụ ego ole ọ ga-erite na ya.
ugbu ahụmịhe ọkachamara na CV gị n'ụzọ ọrụaka - na-enweghị edepụta ọrụ gị n'ụdị paswọọdụ banal. Gbalịa ịkọwa ha na onye mbụ ịmalite mkparịta ụka nke mbụ na onye na-ewe ọrụ.
Ọ bụrụ na achọọ ka izipu akwụkwọ ozi mkpuchi, ị ga-ada ụda dị ka onye sheikh Arab dị na ya.
Lezienụ anya n’ile anya akwụkwọ gị.
Don'tkwesighi ịmara mmemme eserese ma ọ bụrụ na iji Onye Okike CV . Ngwá ọrụ ahụ ga-emepụtara gị akwụkwọ ọkachamara maka gị.
“Nke kasị nọrọ m ebe n'ụwa".
Womenmụ nwanyị Polish na-agwa anyị banyere azụlite ọrụ na Dubai
Dubai abụghị ebe maka ndị agadi na ụlọ ọrụ na-eto eto. Echere m na ọ bụ eziokwu - Małgorzata, otu n'ime ụmụ nwanyị ndị kwetara ikwu banyere ibi na ịrụ ọrụ na Dubai. Obodo nke akọwapụtara nke ọma nke na o siri ike nghọta maka ndị Europe.
Nnukwu mbara igwe, ọzara na-adịghị agwụ agwụ, ndị sheikh bara ụba, okomoko ụgbọala - ndị a nwere ike ịbụ mkpakọrịta mbụ ndị na - agụ akwụkwọ Poland ji eche banyere mgbe ha nụrụ okwu ahụ bụ "Dubai". Site na mpụga, ọrụ n'obodo a nwere ike iyi akụkọ. N'ezie, n'okpuru akwụkwọ ahụaja siri ike, ezigbo ihu Dubai na-ezo ọtụtụ ezughị okè.
N'azụ ọrụ na Dubai. Ego ole ka ị ga-enweta, ego ole ka ị ga-eme?
Ọ bụrụ na ụgwọ ọnwa kwa ọnwa ruru puku kwuru puku zlotys na dum ga-emetụta akaụntụ ahụ, na-akwụghị ụtụ isi na onyinye ezumike nka, ọ bụrụ na ụgbọala ndị ahụ dị ọnụ ala karịa na ndị were ya n'ọrụ na-enweta nlekọta ahụike na agụmakwụkwọ nke onwe maka nwata ahụ, ọ nwere ike ịpụta na anyị bụ na Dubai.
Dabere na data nke Bankier.pl nyere , ihe karịrị 2,300 Poles na-ebi na United Arab Emirates kpamkpam. Mpaghara Ọzara aghọọla ọmarịcha ebe ọrụ ọkachamara maka ọtụtụ ndị ọkachamara.
Enwere otutu asịrị banyere Dubai - site na uru nke itinye ego megain na-esote ruo ọnọdụ nke ndụ ndị bi na ndụ kwa ụbọchị. Bụ ụgwọ ọnwa nke onye injinịa ka ọ bụ manager na Emirates zuru ezu iji nọgide na-enwe ebe ị naghị akwụ ụtụ isi, mana ị naghị enweta ego ezumike nká na nká? Azịza nye ajụjụ ndị a ka a gbara ajụjụ ọnụ na Bankier.pl site na onye Poland nwaanyị , onye a ma ama vlogger Marcy Shan .
Bankier.pl: Ka anyị malite n'eziokwu na ị ga-akwụ ụgwọ oge ịnọ na Dubai. Banyere ọnọdụ Polish - nke ukwuu. Agbanyeghị, usoro ahụ anaghị akpata nsogbu ọ bụla?
Marcy Shan: Ndi mmadu njem nlegharị anya nke 30 na Dubai na-efu ihe dị ka 500 PLN. Enwere ọtụtụ ụlọ ọrụ na-agbagha usoro a, yana mgbe ị na-anya ụgbọ elu ndị ọdụ ụgbọ elu Emirates, mgbe ịzụrụ tiketi visa, ị nwere ike itinye akwụkwọ ntanetị ma ọ na-apụta dị ọnụ ala (ihe dị ka. PLN 390). Ka izu zuru oke, anyị na-enweta nkwa dị njikere maka visa site na ozi-e ma nwee ike iji ụgbọ elu gaa Dubai.
Ọ dịla anya ị nọrọ ebe a. Agbanyeghị, echere m na ọ ka na-esiri gị ike ime ụfọdụ iwu nchịkwa ego. Ole n’ime ha ka e kwesịrị ịkpọtụrụ ebe a?
Enwere mmachibido iri nri na ị drinkingụ ihe ọ inụ inụ ụzọ ụgbọ oloko - ị ga-enweta tiketi 100 AED, ị gaghị ata ata! Enweghi ikike mpempe akwụkwọ ikike ahaziri iche na Poland, yabụ ntakịrị ọnụọgụ na ndebanye aha (dịka B 123) ma ọ bụ karịa na-agụghachi ọnụ ọgụgụ ahụ, ọ dị elu karịa ọnụahịa. Kwa afọ, a na-ahazi ngwa ahịa ndị dị otú ahụ ma ọnụ ahịa na-eru ọnụ ahịa na-egbu mara mma - ruru ọtụtụ nde zlotys. Inwe bọọdụ dị otú a bụ ụzọ isi dị iche na igwe mmadụ ahụ, ka emechara, maka ụgbọala dị okirikiri, ọ naghị ara onye ọ bụla nọ ebe a ama. Ego sitere na oke okike ndị a na-abụkarị akaụntụ ọrụ ebere.
Agbanyeghị, ụgbọ ala nyere eziokwu na enweghị VAT na Dubai, ha kwesiri ịdị ọnụ ala?
Ihe niile dabere na ihe nlereanya na ika ahụ, mana a na-eche na ụgbọ ala dị ọnụ ala karịa 30%. Nnukwu ihe dị iche bụ na ụgbọ ala ndị okomoko si Europe (dịka Porsche), yana ya na ụdị ndị Japan dịka Toyota, Nissan. Cgbọ ala si USA dịkwa ọnụ ala (Infinity, Acura, Chevrolet ma ọ bụ American Ford). Ọbụlagodi na ọnụahịa ahụ agaghị adị oke ala, anyị ga-enweta ngwungwu akụrụngwa dị elu karịa na otu ọnụahịa, dịka ọmụmaatụ na Poland.
Eziokwu na-adọrọ mmasị: ụfọdụ ụgbọ ala nwere ike ịbụ ihe dị ọnụ ala karịa - dịka ọmụmaatụ, ndị a ma ama n'etiti ndị bi na Mitsubishi Pajero, na nke kachasị agba na engine gas nke 3.8, V6 na Emirates na-akwụ ụgwọ PLN 120,000 (maka nke a, anyị ga-enweta mkpuchi mkpuchi maka otu afọ, nyocha n'efu na otu afọ na akwụkwọ ikike maka afọ 5), mgbe maka ụdịrị ihe eji eme ihe na Poland, mana injin diesel anyị ga-akwụ ụgwọ ihe dịka 220 puku.
Enweghị VAT a ka a na-eche na ịzụ ahịa kwa ụbọchị?
Niile dabere n’ihe na ebe anyị zụrụ. Eletrọniki na nnukwu ụlọ ahịa yinye nwere ike ịkwụ ụgwọ karịa ọnụ ala na Poland na-enweghị atụ, mana ọ bụrụ na anyị banye omimi, anyị nwere ike ịzụta iri na abuo ma ọ bụ karịa, ọtụtụ narị na iri dị ọnụ ala. Inwe mmasị ọzọ - Ngwongwo ihe eji eme ihe Apple na-efu ihe ruru ka ọ dị na US, mgbe ụfọdụ ọ ga-adị ọnụ ala karịa.
I dere na oge a blog banyere otu onye odeakwụkwọ nke onye isi ala ahụ siri kpuchie ọnụ ahịa nri nke 400 ruo ọtụtụ afọ. Ahịa a na-arapara n'ahụ ya?
Eziokwu ahụ bụ na a na-achịkwa akụ na ụba Emirates site n'elu dị oke mma maka ndị niile nwere onwe.
Sheikh akpọnwụwo ọnụ ahịa nri nri, kemịkalụ ụlọ, mmanụ ọkụ, mmiri, ọkụ eletrik na ikekwe ọtụtụ ngwaahịa ndị ọzọ anyị anaghị amatabeghị. Yabụ, dịka ọmụmaatụ, osikapa, ụfọdụ akwụkwọ nri na mkpụrụ osisi, mmiri ara ehi, na ihe maka ụmụ amụrụ ọhụrụ abụrụla ọnụ ahịa kemgbe ọtụtụ afọ.
Ha na-ekwu mmiri ara ehi - mmiri ara ehi na yogọt na-adị ọnụ.
Ọbụghị nnukwu mmiri ara ehi, mana ihe ọ bụla batara, ọkachasị ikuku. Ọ dabara na, a na-emepụta ụfọdụ ngwaahịa na mpaghara, mpaghara mpaghara Ọwara ma ndị ahịa nwere nhọrọ. Enwere ike ịzụta Yogurt na US site na nha nke PLN 20, yana yogọt nke mpaghara maka PLN 2.
Kedu ihe ị chere ka dị ọnụ karịa na Poland?
Rasberi dị oke ọnụ, mkpụrụ bịrịbọn, currants na ihe ọ bụla na-enweghị ike ịmepụta na mpaghara - n'ihi ụgwọ ụgbọ njem.
Ọ dị ka akwụkwọ nri - ọ bụrụ na anyị chọrọ ịzụta inine na-esi ụgbọelu ebubata na US, dịka ọmụmaatụ, anyị ga-akwụkwu ụgwọ, mana ọ bụrụ na afọ juru anyị na mpaghara, nke na-adịghị ụkọ, ọnụahịa nwere ike ịbelata na ihe ijuanya. Dịka ọmụmaatụ, maka kilogram tomato anyị ga-akwụ ụgwọ nke hà ZNUMX na 2 zlotys, dabere na mba nke si.
» M bi ebe ahụ: Dubai. Onye na-elekọta Polish banyere ndụ
Anụ ezi anụ ezi dịkwa oke ọnụ, ọkachasị nke na-esite na Poland (ndị niile kacha eri anụ na-abịa site na obodo nọ ebe a), mana anyị nwere ohere ị nweta nnukwu anụ ehi Wagyu / Kobe, yabụ anyị anaghị eri nke ọzọ.
Mgbe ị na-atụnyere ọnụ ahịa, ị na - ewere oke dịka 1: 1?
I nwere ike ikwu. Dirham nwere ihe jikọrọ ya na dollar US, yabụ dabere na nke ikpeazụ na zloty, enwere ike inwe obere ọdịiche. Ana m ewepụ 10-15% belata mara ọtụtụ zlotys. Agbanyeghị, m na-agbakọta ma na-emeso dirhams n'otu ụzọ ahụ dị ka zlotys, ọ dị mfe karị.
Ihe dị iche bụ na maka ịkwụ ụgwọ Dubai ị nwere ike ịzụta ọtụtụ ngwaahịa karịa nke ị na-akwụ na Poland. Ego ole ka ndị ọkachamara na-enweta na Dubai?
Ọnụ ego ụgwọ ọnwa buru ibu, mana nke bụ eziokwu bụ na, dịka ụwa niile, ndị ọkachamara na-enweta ego kachasị. Ndị injinia, ụkpụrụ ụlọ ma ọ bụ ndị ọrụ nchịkwa nwere ike irite XlotX ma ọ bụ 20 puku zlotys kwa ọnwa na ọ dịghị onye tụrụ ya n'anya. N'ezie, enweghi oke dị elu, ndị isi nke nnukwu ụlọ ọrụ ma ọ bụ mpaghara ọha na-enweta ọtụtụ narị puku zlotys kwa ọnwa.
A bịa n’ihe ruru ego ị nwetara na mmefu, ọ dabere n’ego ịchọrọ ibi na ya. Ọ dị mfe ịchọpụta na ka ụgwọ ọnwa anyị na-abawanye, anyị na-amalite itinyekwu ego maka na anyị nwere ike ịkwụ ụgwọ ụlọ ma ọ bụ ụgbọ ala ndị ka mma. Agbanyeghị, ọ bụrụ na anyị chọrọ ịchekwa ego maka ọdịnihu, Dubai na-enye anyị nnukwu nzukọ.
Ọ bụ obodo na-adọpụ ohere maka nnukwu ego, mana ndị chọrọ ịga njem maka ọrụ arụ ebe a agaghị enweta ya?
Kpamkpam. Ọ bụ ndị kwagara Eshia na-arụ ọrụ ahụ. Salarygwọ ụgwọ a agaghị egboju ndị Europe, yabụ enweghị ebe ị ga-achọ ọrụ na-enweghị asambodo. Oke ego ndi oru aka ala di ala (dika ndi na ewuru ulo oru ihe nlere) site na Esia rue ihe ha gha enweta n’obodo ha kariri ma obu otu ka nke ndi Pent ndi Poland, mgbe ndi Poloji jiri wentbanye jee ego ma zuta ulo maka owuwu. ego na Poland. N'oge ugbu a ọ ga-abachaghị uru maka anyị.
Dubai aghọọla akara ngosi nke ọrụ ịkpa arụ, ebe ndị na-eto eto na ndị nwere onwe ha bi kacha mma. N’aka nke ọzọ, a na-ahụ maka ndozi dị oke ọnụ karị mgbe ezinụlọ ahụ toro. Schoollọ akwụkwọ a na-eri?
Na United Arab Emirates anyị enweghị ụtụ isi, ya mere - agụmakwụkwọ bụ nke onwe. Nhọrọ ụlọ akwụkwọ na kọleji buru ibu. Can nwere ike ịhọrọ n'etiti ụlọ akwụkwọ Bekee, American ma ọ bụ ọbụna Australia. Mgbe anyị gụsịrị ụlọ akwụkwọ dị otú ahụ, anyị na-enweta otu diplọma dị ka a ga-asị na anyị na-amụ ma ọ bụ na-agụ akwụkwọ na obodo ebe mahadum enyere. Agụmakwụkwọ na-abawanye na afọ nwatakịrị ahụ, na nkezi ọ bụ ihe dị ka PLN 30,000 otu afọ, mana ezigbo ụlọ akwụkwọ ọdịda anyanwụ nwere ike iru ihe ruru okpukpu abụọ. Mgbe ụfọdụ ndị na-arụ ọrụ nne na nna na-akwụ ụgwọ nkuzi ahụ.
“N’adịghị ka anya, Dubai abụghị naanị mbara igwe dị ogologo. Onye ọ bụla ga - achọta onwe ha ihe ọ bụla ”, foto: Thinkstock
Enwekwara ụlọ akwụkwọ Polish n'efu na ụlọ ọrụ nnọchiteanya Poland. Klas na akụkọ ihe mere eme, asụsụ Polish ma ọ bụ ọmụmụ ihe mmekọrịta na-ewere ọnọdụ na ngwụsị izu na site na ihe m nụrụ na ha bụ ndị a ma ama.
A na-akwụkwa ụgwọ nlekọta ahụike.
Ee, na onye were gị n'ọrụ nwere ọrụ dịịrị iwu iji nye ndị ọrụ niile ọrụ mkpuchi. Tupu ị na-eme atụmatụ nwa gị, ị kwesịrị ịchọpụta ma ịtụrụ ime na ịmụ nwa na nhọrọ mkpuchi, ma ọ bụ na ị nwere ike ịtụ anya ụgwọ dị elu. Ọ dị mma ịkọba na na ọtụtụ mkpuchi agaghị akwụ ụgwọ maka ọgwụ ma ọ bụrụ na dọkịta depụtara ya. Onye amụma mkpuchi na-akwụghachi ụgwọ ihe niile.
Ego ole ka ọrụ nlekọta ahụike ndị ọzọ na - eri - nleta ịga hụ onye ọrịa nọ ma ọ bụ ọgwụgwọ ezé?
Ọnụ ahịa nleta dị iche iche, ụlọ ọgwụ na ụlọọgwụ dị ọnụ ala ma dị oke ọnụ, ọ dabere na ndị ọrụ, akụrụngwa, ọnọdụ, wdg. Enwere ike ịgwọ ezé na nzuzo maka narị zlotys abụọ na ụlọ ọgwụ nkịtị, yana ọtụtụ maka puku n'ụlọ ọgwụ okomoko, ebe anyị nọ ọdụ na-ekiri ihe nkiri nke oche agha ma ọ bụ na-ege egwu dị jụụ.
Ka anyị nọrọ na ihu igwe ụlọ ọgwụ nwa oge. Na Dubai, n'ihe ọghọm ụgbọ ala nke ndị mmadụ nwụrụ, onye ahụ mebiri ezinụlọ nke onye ahụ nwụrụ anwụ, nke a kpọrọ ego ọbara ruru ihe ruru 500 puku dirham. Ọ bụ eziokwu na ọ bụrụ na ịnweghị ụdị ego a, ị nwere ike ịga nga?
Ee, nke ahụ bụ eziokwu, mana ego ahụ gbasara 200,000 dirhams, ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka otu onye. Diyya ma ọ bụ ụgwọ ọzọ ka a ga-akwụrịrị nke ezinụlọ onye a merụrụ ahụ mgbe anyị butere ihe ọghọm ma ọ bụ mgbe anyị na-emebi ahụ ike.
Mkpuchi ahụ ọ ga-ekpuchi ego a?
Youkwesịrị ịchọpụta na ego mkpuchi ahụ na-ekpuchi ụdị mmefu ahụ. Youzụta ụgbọ ala ọhụụ, nke a na-abụkarị ikpe. Mgbe inwere mkpuchi na onwe gị, na-enweghị ere ahịa ụgbọ ala, ị kwesịrị ị paya ntị na ihe echekwara na mkpuchi ahụ.
Ebe United Arab Emirates ewepụtaghị maka nhazi ezumike nka, a na-ahapụrụ akụkụ nke mmefu ego ụlọ n'ụlọ nke onwe ya iji kwado afọ ndị gara aga. Ọ nwere ụlọ ọrụ mkpuchi na ngwaahịa mkpuchi ọ bụla na-akwalite ebe a?
Enweghị onyinye ezumike nka ma ọ bụ ọfịs na-ahazi ya n'ụzọ ụfọdụ. Maka nke a enwere iwu na-ekwe nkwa maka onye ọrụ ịkwụ ụgwọ ụdị ekele maka afọ ọ bụla rụrụ ọrụ na otu ụlọ ọrụ. Ọnụ ego ụgwọ kwụrụ ụgwọ dabere na afọ ole ịrụ ọrụ ma rute otu ụgwọ ọrụ kwa ọnwa maka afọ ọ bụla rụrụ ọrụ, ọ bụrụ na anyị arụla ọrụ afọ 5 opekata mpe. Ọ bụ ihe dị ka ego ezumike nka, naanị na-akwụghị ụgwọ onyinye.
N’ezie, anyị nwere ike itinye ego na penshion na ego chekwaa ma mpaghara ma na mba ofesi.
Enweghị ego ezumike nka, mana kedu maka enyemaka ndị ọzọ? A na-ebufere akụkụ ọ bụla nke ụgwọ iji ebumnuche ndị ọzọ?
Salarygwọ ahụ na-emetụta ego anyị nwere. Anyị anaghị akwụ ụgwọ onyinye ọ bụla - dịka ọmụmaatụ ZUS na Poland. Onye were ya n’ọrụ na-ekwe nkwa maka inshọransị ahụike, ụgbọ - dịka ụdị mgbakwunye ụgwọ ọrụ, nke anyị nwere ike iji zụta ụgbọ ala mgbakwunye - yana oge ụfọdụ nri.
Tslọ ndị ọrụ ụlọ ọrụ bụ ọkọlọtọ dịkwa n'etiti ndị na-abịa ịrụ ọrụ na Dubai?
Onye were ya n’ọrụ gha enye ya ulo. Dabere n'ọnọdụ e nwere, nke a bụ mgbakwunye ụgwọ ọnwa nke enyere gị ohere ịgbazite ụlọ ma ọ bụ ụlọ. Mgbe ụfọdụ ụlọ ọrụ nwere ụlọ nke ha ma debe ndị ọrụ ha ebe ahụ.
Elu, skyscrapers ọgbara ọhụrụ… Ọ ga - abụ ikwubiga okwu ókè ịsị na ụlọ enweghị ebe a n'azụ obodo, n'ihi na ihe niile bụ obodo ebe a?
Na-emegide ihe ngosi, Dubai abụghị naanị mbara igwe dị ogologo. Onye ọ bụla ga-achọtara onwe ha ihe. Ulo dị na mpaghara eji ejiji, nke nwere windo ụlọ-elu na ọmarịcha obodo ma ọ bụ osimiri ma ọ bụ ụlọ nwere ogige dị n'etiti, n'akụkụ osimiri, n'okpuru obodo ma ọ bụ ọzara. Na-arụ ọrụ na Dubai maka mkpanaka ọ bara uru ịkwaga ebe ahụ n'ezie.
Nkwụ Palm - ụdị nkwụ ama ama ego na mmiri, foto: ThinkStock
Enwekwara ụlọ obibi dị ala dị ala, na-echetara ndị si n'ọtụtụ obodo Europe. Ahịa na-adabere na ọnọdụ, ọkọlọtọ, mpaghara. Ogologo ya di obosara, ma na mpaghara diiri mma maka ulo ime-ulo nke 2 nke nwere nha nke 90 2, na nkezi, 55-75 puku. PLN kwa afọ.
Iji kwubie - o doro anya na ọ bụ naanị ndị na-arụ ọrụ mkpanaka abụọ na ịntanetị na Dubai? Ahịa - maka ọnọdụ dị otú a - na-adịghị oke elu?
A na-ejikwa ọrụ telefon. Ndị ọrụ ọrụ abụọ ahụ (Etisalat na Du) bụ ndị steeti. Nke a bụ n'ihi na enweghị ụtụ isi, ndị Arab chọrọ ịnwe ego mmefu mgbe niile.
A bịa na ọnụahịa, ọ bụrụ na anyị atụnyere Poland na ha dị elu, dịka ọmụmaatụ bandwidth 16mbit na-akwụ ụgwọ PLN 265, maka otu 100mbit anyị ga-akwụ ụgwọ ihe dị ka PLN 800. Internetntanetị maka ụlọ ọrụ dị oke ọnụ karịa. Cheta, odi iche na ego aka gi. Ahụtụbeghị m onye ga-eme mkpesa banyere ọnụ ahịa ịntanetị mgbe ọ na-akwụ ụgwọ PLN 1.5 kwa liter nke gas.
Na-arụ ọrụ na Dubai. Sheikhs na-achọ ọrụ dị ọnụ ala. Ha chọtara ya na Poland
“Na-arụ ọrụ na Dubai ma nwee ahụmịhe nke ndụ gị!” - na-agba ume na ụlọ ọrụ Tempo Group bụ ndị na-ahụ maka ịnwe ndị ọrụ nnukwu ogige ntụrụndụ na United Arab Emirates. Dubai ọ gha aburu uzo ohuru nke mmeghari akụnụba nke Poles?
Nkwari akụ Mariott na Warsaw “Okęcie” ọdụ. Mkparịta ụka ndị mbụ na ndị dị njikere ịnwe ọhụụ nke paradaịs Dubai na-ahazi maka 7.30. Arrivefọdụ na-abịa ọtụtụ awa tupu mgbe ahụ. Ha si Kołobrzeg, Hel, Zgorzelec, Wrocław na Silesia bia ebe a. Onye obula gabigoro n’agba nke mbu, dika mkparịta ụka ekwenti na - ewepu ndi n’amaghi asusu bekee.
Dumai bụ Ebe Dị !tụnanya!
A na - akpọ ndị nkuzi n'ime ụlọ nzukọ, mgbe ha nwesịrị obere ngosipụta nke Dubai Parks & Resorts complex wuru. Utọ utom emi esịne kpukpru owo. Onye ahụ na-eme ugbu a, onye Portuguese Renato, n'ime nkeji iri na abụọ ma ọ bụ karịa, na-enye ọhụụ nke ohere dị ebube na-echere ndị jisiri ike ịnabata usoro mbanye.
A na-atụ anya ka 2020 wuo ọtụtụ ogige ntụrụndụ ebe ahụ. Ihe oru kasịnụ bụ ihe mgbagwoju anya, nke gụnyere ọrụ na-ezo aka maka ihe nkiri a kụrụ "Egwuregwu Agụụ" na ogige ntụrụndụ Bollywood. Na mgbakwunye, na Arab wuru ogige ntụrụndụ ise ndị ọzọ nke arụpụtara na mmekorita ya na ụlọ ihe nkiri Asia: Bollywood Films Studios, Mumbai Chowk, Hall Of Heroes na ndị ọzọ.
Enweghị ahụmịhe ị nabatara.
Imirikiti a na-enye maka Pole na-abịa site na mpaghara atọ: ahịa, eriri afọ na ọrụ ịchọ mma. “Ahụmịhe achọghị ọrụ na ụmụ anabatụrụ, imeghe, enyi na enyi, ezigbo bekee, bekee, akwụkwọ ikike ngafe ”- ndị a bụ ntozu oke nke onye na-achọ akwụkwọ kwesịrị ịnwe“ Onye Nleba Anya. Enweghị ọtụtụ ihe achọrọ karịa Onye isi otu ma ọ bụ onye na-elekọta anya (ebe a ịchọrọ ọ dịkarịa ala otu afọ nke ụdị ọrụ ahụ)
Ruo 17: 00 na - ekwu okwu na onye were ya n'ọrụ, yabụ otu ndị njikwa sitere na mpaghara ụfọdụ akọwapụtara na ogige ahụ, na - aga n'ihu. N'ime ihe karịrị otu narị mmadụ pụtara na họtel ahụ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 90 pasent nke ndị dị njikere nabatara. Naanị ndị Bekee dị ụkọ Bekee ka ezigara n'ụlọ, mmadụ ole na ole kwụsịrị mgbe ha hapụsịrị ajụjụ ọnụ ahụ.
Ego na-aka njọ… na Poland
ịnụ ọkụ n'obi nke ndị na-akwụ ụgwọ n'ọdịnihu, ndị na-echere ma ọ bụ "ndị isi otu" na-ebelata ntakịrị mgbe ha matara banyere ọnọdụ ego. Ọ na-enyo na n'ọnọdụ ụfọdụ ụgwọ ọnwa dị njọ karịa na Poland. Dịka ọmụmaatụ, onye na-akwụ ego were ọrụ na Dubai Parks & Resort ga-enweta ụgbụ 2,000 Dirhams ma ọ bụ ihe dị ka 2,100 zlotys. Na Biedronka dị ka onye na-echekwa ego, ụgwọ a na-akwụ bụ PLN 2,500.
Ma enwekwara gbakwunye. Dị ka ị maara, na United Arab Emirates bụ ụtụ ụtụ, yabụ ihe ndekọ ego ahụ na-enweta ụgwọ ọrụ otu narị narị. Otu oge n’afọ, onye were gị n’ọrụ na-enye ezumike ụbọchị 30 ma na-akwado tiketi ịlaghachi Poland. Ọnụ ego nkịtị bụ ihe dịgasị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, maka otu lita mmiri ara ehi na Dubai anyị ga-akwụ ihe dịka 5 Dirhams ma ọ bụ ihe dị ka 6 zlotys, mpịakọta bụ ihe dị ka 1 Dirham ma ọ bụ zNUMys 1.5. Ọ kachasị mma ịzụta ngwaahịa mpaghara, ihe kachasị ọnụ bụ nri na-esite na Europe.
Companylọ ọrụ na - eweghachi ndị ọrụ na - agwa ndị ọrụ banyere ndụ ha n'ọdịnihu na Dubai. Otu n'ime iwu ndị kachasị - ntaramahụhụ ị alcoholụ mmanya na-egbu ọha na eze (gụnyere ịchụpụ mmadụ mba ọzọ), anabataghị igosipụta ihu ọha. Agbanyeghị, ụgbọ njem ọha na-atọ ụtọ karịa na Poland - Dubai nwere metro ọgbara ọhụrụ n'ụwa, okporo ụzọ na-agba site… Polish Solaris. Kama dị ọnụ ala, ị nwekwara ike ịgbazite ụgbọ ala - ọnụahịa mmanụ ala dị ala karịa na Poland - mana kpachara anya ịkwọ ụgbọala n'okpuru mmanya, ịchụpụ ozugbo.
mmechi: Gịnị kpatara osisi?
Ruo ugbu a, ọkachasị kwabatara na Eshia rụrụ arụ ọrụ na Arab Emirates, onye ọnụego ntụgharị ama elu ọtụtụ oge karịa mba ha. Ruo ugbu a, ọkachasị ndị isi na ndị ọkachamara ọkachasị njem gara Dubai. - Nke a bụ ihe ịtụnanya na m bụ na amaghị m etu esi ejikọta ya ugbu a - kwuru Andrzej Kubisiak, onye isi ụlọ ọrụ mgbasa ozi Ọrụ. - Nnyocha anyị na-egosi na enweghị ọrụ na Europe ka na-anọgide na ọkwa yiri nke ahụ, na Poles na-ekwugharị ịkwaga kama na European Union. Mana ọ dịghị ihe na-eme n'ihi…